Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Jadon Sancho U Ciyaarayo Man United & Kooxda Adag Ee Uu Wajahayo - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaKulanka Ugu Horreeya Ee Uu Jadon Sancho U Ciyaarayo Man United & Kooxda Adag Ee Uu Wajahayo
Kulanka Ugu Horreeya Ee Uu Jadon Sancho U Ciyaarayo Man United & Kooxda Adag Ee Uu Wajahayo
July 14, 2021 Apdihakem Omer Adam Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxda Manchester United ayaa ku dhaw inay si buuxda u dhammaystirto saxeexa Jadon Sancho kaas oo ay mudo kahor heshiiskiisa la gaadhay kooxdiisii Borussia Dortmund xilli uu shalay tijaabada caafimaadka ka gudbay.
Kaddib marka si rasmi ah ay United usoo bandhigto saxeexiisa, Jadon ayaan in mudo ah kasoo muuqan doonin tababarka kooxdiisa cusub maadaama oo uu haatan uun kasoo dhammaaday tartanka Euro 2020.
Man United ayaa xagaagan si deg-deg ah u dhammaystirtay saxeexa Sancho iyaga oo ugu dambayn helaya kaddib suuqii afraad ee ay daba socdeen.
Jose Mourinho ayaa ugu horreyn isku dayay inuu keeno Old Trafford sanadkii 2017 isaga oo kala soo wareegayay kooxda ay xifaaltamaan ee Man City balse Sancho ayaa Dortmund oo u balan-qaaday fursad ciyaareed ku biiray.
Tan iyo markaas Manchester ayaa sanadihii 2019 iyo 2020 sidoo kale isku day-day saxeexa 21 sano jirkaas balse awoodi weyday, laakiin ugu dambayn ayay kooxda tababare Ole Gunnar Solskjaer lacag 73 Milyan oo pound ah kula saxeexanaysaa xagaagan.
Haatan wargeyska Manchester Evening News ayaa sheegaya in kulanka ugu horreeya ee uu Jadon u ciyaaro Red Devils uu noqon doono midka ay Everton kahor tagayaan.
Kulankaas oo ah midka ugu dambeeya ee ay xilli ciyaareedka iskugu diyaarinayso United ayaa dhacaya 7-da bisha dambe ee August.
Sancho ayaa saddex toddobaad oo fasax ah galaya kaddib Euro 2020 waxaana la filayaa inuu qayb ka noqon doono ciyaarta furitaanka Premier League ee ay 14-ka August United la ciyaarayso Leeds United.